MOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာတိုးပွားနေသော Microsoft Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁ | Linux မှ
MOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာတိုးပွားနေသော Microsoft Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
ဒီနှင့်အတူ လေးပိုင်း အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ « Microsoft ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် " ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ၏ catalog ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းဆက်လက် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de «Microsoft ».
အဖြစ်လူသိများအုပ်စုများ၏ Technological Giants တစ် ဦး ချင်းစီကထုတ်ပြန်သောပွင့်လင်း applications များငါတို့၏အသိပညာကိုတိုးချဲ့ဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက် GAFAM။ များစွာသောသူတို့သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းအောက်ဖော်ပြပါမြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် - "Google, Apple, Facebook, Amazon နှင့် Microsoft".
GAFAM Open Source - နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကို Open Source ၏မျက်နှာသာပေးသည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောကန ဦး ထုတ်ဝေဤပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ပြီးနောက်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။
ယနေ့အချိန်တွင်အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်များကိုသူတို့၏စီးပွားရေးပုံစံများ၊ တစ်နည်းဆိုရသော် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောနည်းပညာများသည်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များ၊ ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်၎င်းတို့ထဲမှအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ " GAFAM Open Source - နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကို Open Source ၏မျက်နှာသာပေးသည်.
MOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာတိုးပွားနေသော Microsoft Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
MOS-P2: ကျယ်ပြန့်စွာတိုးပွားနေသော Microsoft Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
MOS-P3: ကျယ်ပြန့်စွာတိုးပွားနေသော Microsoft Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
1 MOS-P4: Microsoft Open Source အပိုင်း ၁
1.1 Microsoft Open Source application များ
1.1.2 ကျွမ်းကျင်သော UI
MOS-P4: Microsoft Open Source အပိုင်း ၁
applications များ Microsoft ၏ Open Source
စတင်ခြင်းမပြုမီတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်သည် Microsoft Open Source (MOS) သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက် -
Open source သည် Microsoft ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊
ထို့အပြင် Microsoft ၏ Open Source သူတို့ရဲ့မှအောက်ပါ link ကိုတဆင့်တိုက်ရိုက်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ် ရရှိနိုင်စီမံကိန်းများ.
del "Microsoft Open Source" သင်ဆက်လက်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်စာရင်းရှိအောက်ပါအပလီကေးရှင်းများမှာ -
အတိုချုပ်, ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် "Microsoft Open Source" ဤလျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါ
၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်လျှောက်လွှာဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့တွင်အသုံးအများဆုံးစိန်ခေါ်မှုများကိုသင်ထိရောက်စွာကူညီနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Web Components နှင့်ခေတ်မီ web စံနှုန်းများကိုအခြေခံသည့်နည်းပညာများစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ "
သူ့နေစဉ် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျော်ကအောက်ပါထည့်ပါ။
"FAST နည်းပညာကို ၀ ယ်လိုအား (သို့) လုပ်ငန်းအဆင့်တန်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊
မှတ်ချက်ဖြေ - အသေးစိတ်နဲ့အသုံး ၀ င်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအောက်ပါမှာတိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်တယ် link: လျင်မြန်စွာ.
၎င်းသည်ကုဒ်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အပြန်အလှန်အပြုအမူများကိုမျှဝေသည့်လှပပြီးပလက်ဖောင်းအပလီကေးရှင်းများဖန်တီးရန်အတွက် Fluent Design UX မူဘောင်များစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ "
သူ့နေစဉ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျော်ကအောက်ပါထည့်ပါ။
"Fluent UI သည်များစွာသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် (Microsoft) ကဲ့သို့ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးပြုနိုင်စွမ်း၊
မှတ်ချက်ဖြေ - အသေးစိတ်နဲ့အသုံး ၀ င်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအောက်ပါမှာတိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်တယ် link ကို.
မျှဝေထားသည့်ပြည်နယ်ကိုဖြန့်ဝေပြီးတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်၎င်းသည် client စာကြည့်တိုက်များစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
"ဒီစာကြည့်တိုက်တွေကဖောက်သည်မျိုးစုံကိုဒေတာဖွဲ့စည်းပုံမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖန်တီးနိုင်ပြီးဒေသခံဒေတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ encoding ပုံစံတွေသုံးပြီးခွင့်ပြုပါတယ်။ "
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤစတုတ္ထတူးဖော်ရေးအပေါ် «Microsoft Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Microsoft»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » MOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာတိုးပွားနေသော Microsoft Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
Archinstall သည် Arch Linux ကိုတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေမည့် Utility ဖြစ်သည်